परिवर्तनशील समयको असर हामीमा कति ?
> परिवर्तनशील समयको असर हामीमा कति ?
१ श्रावण २०७७, बिहीबार २०:३५
बुटवल, १ साउन । परिबर्तनशिल समयले संसारमा धेरै अवसरको ढोका खोल्दै जाँदा हाम्रा कतिपय भावनात्मक सम्बन्धका ढोका भने बन्द गरिरहेको छ । अहिलेका युवाहरू सकेसम्म आफन्तकहाँ जाँदैनन्, चाडबाड उनीहरूलाई बाबुआमाका लागि मनाइदिनेजस्तो बन्दै गएको छ, नातेदारहरू चिन्दैनन्, चिने पनि वास्ता गर्दैनन् ।
अहिलेको युवापुस्ता साँझ १० बजेपछि सुत्दैन । रातभरि नेटमा बस्नु, बिहानभरि सुत्नु उनीहरूको दिनचर्याझैँ बनेको छ । पौरखको कुरा टाढै राखौँ, उनीहरू राम्ररी बोलिदिँदा बाबुआमाले खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ । खासै काम केही छैन, तर छोराछोरी उठ्दै तनावमय मुहारमा देख्ने बाबुआमाको सङ्ख्या बढ्दै छ । के भयो ? किन उदास छौ भनेर आफ्नै छोराछोरीलाई सोध्न नमिल्ने अवस्थामा बाबुआमा छन् । पहिलेपहिलेजस्तो स्कुल गएदेखि घर फर्किएसम्मका कहानी छोराछोरीले बाबुआमालाई सुनाउँदैनन् न त बाबुआमाकै कुरा सुन्छन् । स्कुल–कलेजले देखाइदिएका सपना अभिभावकका लागि अर्को चुनौती हुन् । नेपालमा त पढ्ने कलेज नै छैनन् जस्तो गरी उच्च शिक्षाका लागि विदेशी कलेजका सपना प्लस टु, ए लेभलवाला कलेजहरूले देखाउँछन् । पूरा हुनेको ठीकै छ, पूरा नहुँदाको फ्रस्टेसन–व्यवस्थापन स्कुल–कलेजले गर्दैनन्, बाबुआमा आफैँले गर्नुपर्छ, जसको मूल्य त्यति सहज हुने गरेको छैन ।
उसो त हामी साना छदाँ गाउँमा इन्टरनेट थिइन । इन्टरनेट त धेरै परको कुरा हो ठुलाबडाको घरमा ल्यान्डलाइन र हुनेखानेको हातमा ३२०० मोडलको नोकिया मोबाइल हुने गर्थ्यो । सबेरै उठेदेखि साझ रात नहुदाँसम्म लगातार मेलापात वा अन्य घरायसि काममा बिजि हुन्थ्याै । हाम्रो खानपान , ड्रेसप , स्टाइल सबै फरक थियो । घरमै उब्जेका पाैष्टिक आहारलाइ सर्बोत्वम मानिन्थ्यो । प्राय बाहिरको खाना/खाजा खाने प्रचलन हुदैनथ्यो, यदि भए पनि पसलको चाउचाउ अथवा बिस्कुट बिरलै प्रयोग गरिन्थ्यो । हरियो सागपात ,मकैको आटोपिठो खाएर हामी तन्दुरुस्त थियाै । पहिलेदेखि नै बाहिरी बातावरणमा घुलमिल हुने, बुझ्ने र नयाँकुरा सिक्ने हामिमा जोसजागर थियो ।
तर समयले ह्वात्तै नयाँ फड्को मारेको छ । अहिले अधिकाशं गाउँमा पनि इन्टरनेट छ । घरघरमा ल्यान्डलाइनको सट्टा प्रबिधिले फड्को मारेका नयाँनयाँ इन्टरनेटका साधन छन् र युबापुस्ताको हातहातमा आइफोन र ट्याब हुन्छन् । सबेरै उठेदेखि साझ रात नहुदाँसम्म उनिहरु इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । अहिलेको खानपान , ड्रेसप , स्टाइल सबै फरक छ। घरमै उब्जेका पाैष्टिक आहारलाइ सर्बोत्वम मानिदैन यदि मान्याै भनेपनि बिषादिरहित बस्तु तथा सेबा पाउन एकदमै मुस्किल छ । बिदेशबाट आयातित बजारका सामानहरु धेरै प्रयोग गरिन्छ । । प्राय बाहिरको खाना/खाजा खाने प्रचलन हुन्छ, चाउमिन/ममो र समोसाजस्ता होटलका खाजा सर्वप्रिय भएका छन् । गाउँघरमा फलेको हरियो सागपात ,मकैको आटोपिठो बिरलै प्रयोग हुन्छ ।
आजका युबापुस्तामा बढ्दो इन्टरनेटको प्रयोगले शारिरिक र मानशिक तनाब छ । प्रबिधिले फड्को मारेसंगै विभिन्न सामाग्रिले उनिहरुलाइ लोभ्याएको छ । ८ बर्ष नपुगेका बच्चाहरु इन्टरनेट बिना बस्न सक्दैनन् ।
रंगिन प्रबिधिले उनिहरुलाइ लगातार आफुतिर आकर्षित गरिरहेको छ । घरपरिबार , साथिभाइभन्दा उनिहरुलाई इन्टरनेटले रमाइलो दिइराखेको छ । फलस्बरुप उनिहरु इन्टरनेट र बदलिदो संसारप्रति थप आकर्षित छन् । यसको समाधान बेलैमा नखोजे तत्कालीन र दिर्घकालिन समयमा ठुलो समस्या निम्तने देखिन्छ ।
इन्टरनेटमा मानिसहरुलाइ आकर्षित गर्न विभिन्न सामाग्रिहरु राखिएको हुन्छ कहिकतै त हेर्नै अप्ठ्यारो लाग्ने सामाग्रिहरु राखिएको हुन्छ । हामिले हेर्दैनाै भन्दा भन्दै मबोबिज्ञानमै असर पार्ने भद्दा सामाग्री इन्टरनेटले देखाएको छ । आफै सोच्नुहोस यस्ता सामाग्रि दिनानुदिन इन्टरनरटले देखाउदै जादाँ कस्तो प्रभाब पर्छ , । त्यसकारण अबका बालबालिकादेखि नै हामिले नयाँ बानिको बिकाश गर्नुपर्छ । उनिहरुलाइ सानैदेखि राम्रा सामाग्रीको जानकारि गराउदै लैजानुपर्छ । जसले गर्दा उनिहरुले बयस्क हुदाँसम्म राम्रोनराम्रो छुट्याउने अहम ज्ञान पैदा होस । इन्टरनेटका साधनको प्रयोगलाइ कम गर्न अन्य लाभदायि गतिविधिमा संग्लन गराउनुपर्छ ।यो समयको सहि फाइदा उठाउन सकेमा लाभ नै लाभ छ तर यदि बाटो गलत भयो भने मानिस इन्टरनेट र बदलिदो प्रबिधिमै बिलिन हुनपनि सक्छ पारिबारिक बातावरण राम्रो बनाएर उनिहरुलाइ बाहिरि बाताबरणमा पनि घुलमिल हुनसक्ने बनाउनुपर्छ । मोबाइल दिनुको साटो बिहानसाझ भएपनि राम्रा कुराहरु सुनाउनु पर्छ , ठाउँठाउँमा घुमाउनु पर्छ । घरपरिबार र छरछिमेकमै रमाइलो बाताबरणको श्रृजना गर्नुपर्छ जसले गर्दा उनिहरुको खालि समयको सदुपयोग र राम्रो बानिव्यबहारको बिकास होस । यी र यस्ता धेरै समाधानका उपायहरु छन् जसको माध्यमले चलिरहेको यो पुस्ता संगसंगै अब आउने नयाँ पुस्तालाई पनि नयाँ मार्गदर्शन दिलाउन सकिन्छ ।